घर अफ्रिकन स्टर्न्स यसका लागि उनीहरुसँगको सम्बन्धको बारेमा जानकारी गराईन्छ
एलबी एक पूर्ण स्टोरी को एक फुटबॉल कथा को सर्वश्रेष्ठ उपनाम द्वारा जानिन्छ; "ठूलो मुख्य"। हाम्रो रिगाबल्ट गीत बालबालिकाको कथा प्लस अनर्थ जीवनीको तथ्याङ्कले तपाईंको बचपनको समय सम्मको घटनाको पूर्ण खाता ल्याउँछ। विश्लेषणले उनको जीवन कथामा प्रसिद्धि, परिवार, मृत्युको नजिक र उनको बारेमा धेरै गलत तथ्यहरू समेत समावेश गर्दछ।
हो, सबै क्यामेरानीन राष्ट्रिय टोलीको रक्षा रेखामा उनको प्रभुत्वको बारेमा थाहा छ। तथापि, केवल एक हात केही प्रशंसकहरू रिगाबर्ट गीतको बियोको बारे धेरै जान्दछन् जुन धेरै रोचक छ। अब थप adieu बिना, सुरु गरौं।
रितुबर्ट गीत बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य -बाल्यकाल
रिगर्बर्ट सांग बहागग जुलाईको 1 को 1976 दिन Nkenglicock मा जन्म भएको थियो, दक्षिणी क्यामरून को एक शहर जहाँ खाली हुन्छ एक फुट मा हरेक फुट मा।
उहाँ आफ्नो आमा, बर्नडेनेट गीत र विगतका पिता, पल गीतमा जन्मिएका थिए। गीतको बुबा, पॉल गाउ, उनी जवान हुँदा मरे। जस्तै, उहाँले कहिल्यै साँच्चै आफ्नो पितालाई थाहा थिएन तर फिर भी उनको सबै सफलता को समर्पण गर्दछ। असहमति बिना, उनको जीवनको अनुपस्थिति उनको लागि एक मजबूत प्रेरणात्मक शक्ति थियो।
तिनको किशोर वर्षको दौडान, गीतको रूपमा विचार गरिएको थियो अल्फा युवाहरू, जसले आफ्नो देशी गृहनगरमा हरेक फुटबल-खेलकुद परिस्थितिमा एक डाइरेन्टिङ भूमिका ग्रहण गर्यो। त्यसपछि फेरि, उहाँ उनले एक ठुलो दृढता पाएका थिए किनभने उनले स्थानीय क्लबका लागि खेल्ने र आफ्नो उमेर भन्दा माथिका खेलाडीहरू विरुद्ध खेले।
एक साँचो क्षण रिगब्रिट गीतको लागि आयो, त्यो दिन उनको सपना उत्तीर्ण भयो। फ्रान्सेली क्लब कलअप (मेट्ज) को लागि एक फ्रान्सेली स्काउट ले उठाएको थियो पल रिगबर्ब को त्यो क्षण थियो कि उनि अंततः धनी हुन सक्थे। यस कल-अप टाइममा, आफ्नो राष्ट्रिय टोलीको लागि गीतको महत्वाकांक्षाहरू खेल्न अब लागेका चित्रण नगर्ने देखिन्छ।
फ्रान्सेलीको नजिकको गीत मेट्जमा आफ्नो व्यावसायिक क्यारियर सुरू भयो। उहाँले धेरै बलियो प्रदर्शन गर्नुभयो जसले उहाँलाई चयन गरे इमोजात्मक सिंहहरू 1994 मा विश्व कप को लागि जहां त्यो एक भयो विश्व रेकर्ड धारक (विश्वकप फुटबलर विश्व कप टूर्नामेंटको इतिहासमा रातो कार्ड प्राप्त गर्न).
रितुबर्ट गीत बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य -सम्बन्ध जीवन
एक शक बिना, रिगाबर्ट एक आइकन हो जहाँ सम्म अफ्रीकी फुटबल चिंतित छ। उनको खेलकुद क्षमता र क्षमता, विशेष गरी उनीहरूको जीवनशैली पिचबाट पूर्ण चित्र बनाउँछ। सच्चाइ हो; रिगबोल्ट एक पूर्ण परिवार हो। उनको जीवनको प्रेम, गेब्रिले एस्तर ननोमो मुलबला आफ्नो खेल दिन बाट गीत गाईको साथ भएको छ।
गीत र एस्तरले चार छोराछोरीहरू (दुई छोरा र दुई छोरीहरू)। तिनीहरूका छोराछोरीका नामहरू छन्; रनी, ब्रायन, योहान्ना बर्नडेनेट र हिलारी वेरोनिक लिलिले। रिगाबर्ट गीतले यो सुनिश्चित गरेको छ कि उनको परिवार (पत्नी र बच्चाहरु) लेभरपूल मा रहन्छ र उनको फुटबल खेल्न अन्य देशहरुमा गए।
रितुबर्ट गीत बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य -रोग र नजिकैको मृत्यु
यो सबै एक दिनको शुभकामना भयो,3अक्टोबर 2016 जब क्यामेरोनीन र फ्रान्सेली डाक्टरहरूले दिनहुँ संघर्षको लागि रिगबर्ट गीतको जीवन बचाउँथे जसले एक घृणित आक्रमणको सामना गर्थे।
पूर्व क्यामेरान खेलाडी रिगाबर्ट गीत Yaounde मा उनको घर मा एक स्ट्रोक थियो कि उहाँलाई एक कोमा गिरावट देखा पर्यो। रिपोर्टहरूको अनुसार, यदि यो आफ्नो कुकुरको लागि थिएन भने त्यो मर्छ। यद्यपि, यो सामाजिक सञ्जाल र धेरै समाचार वेबसाइटहरूमा व्यापक रूपमा रिपोर्ट गरिएको थियो जुन पहिले नै मरेको थियो।
रिगबर्ब, जब रिकभरी पछि एक साक्षात्कार दिए वास्तवमा कस्तो भयो भनेर खाता दिए। उनको शब्दहरुमा ...
"मैले ढोका खोलेका थिए किनभने म आगन्तुकको पर्खिरहेको थिएँ, मैले यो छोडेको छु म मरेको छु। मलाई थाहा थिएन मलाई के भयो। म पूर्णतया निर्दोष थिएँ। मैले पनि थाहा छैन कि म जीवन र मृत्यु बीच लडिरहेको थिएँ। द्वितीय रूपमा गिर्यो र असहाय लाग्यो, मैले देखेँ कि मेरो कुत्ताले जोरजस्ती छाडेको थियो जसले मेरो मकान मालिकलाई सचेत गरायो जसले एम्बुलेंस भनिन्छ।
यो साँच्चै एक चमत्कार थियो !! जब म कोमबाट उठे, मैले केवल 60 किलोग्राम उचाल्दै, म के रूपमा ठूलो रूपमा केटाको लागि अविश्वसनीय, "
तल Rigobert गीत घडी पछि उहाँले आफ्नो दुई दिन कोमबाट उठ्नु भयो।
जब उनी कोमामा थिए, पूर्व लिवरपूल खेलाडीले भने, "उहाँ विश्वस्त हुनुहुन्छ कि उनी आफ्नो मृत पिता देख्नुभयो। उनको शब्दहरुमा ...
"अन्धकारले सुरु गर्यो र जब म एक कोमेमा हुनुहुन्थ्यो, मैले मेरो बुबालाई मृत्यु भएको बेला देखेको थिएँ म थियो याद गर्न धेरै थोरै। मलाई हेरे, उनले भने। रिगबर्ट !!, त्यहाँ तपाईं के गर्दै हुनुहुन्छ ?? आउनुहोस् !!! उहाँले मलाई भन्नुभयो। यो साँच्चै एउटा कठिन परिस्थिति थियो।
म अहिले खुसी छु, म वर्तमानमा बस्छु र अतीत भन्दा बढी छैन। के महत्त्वपूर्ण छ कि म राम्रो स्वास्थ्यमा छु, म ठीक छु, "
ती शब्दहरू रिगबर्बले बीबीसीको विश्व फुटबललाई भने। रिगाबर्टले उनको प्रशंसक, परिवार / आफन्त र विशेष गरी उनको देशका राष्ट्रपति पॉल बियालाई आफ्नो व्यक्तिगत बिलका लागि $ 78,000 भुक्तानी गरेका थिए जसले उनलाई बचाए। लिभपूलको प्रकारका शब्दहरू चहचहानाको माध्यमबाट तल देखाइएको जस्तो चहलपहल थियो।
उनले थप भने ...
"सबै प्रशंसकहरू विशेषगरि मेरो परिवारले पहिले नै परमेश्वरले कठिनाइमा राख्नुभएको थियो। तिनीहरू सबैले मेरो अवस्था कस्तो थियो भनी जान्दथे र प्रार्थना गर्न थाले। मेरो परिवारका सबै सदस्यहरू प्रार्थना गर्दै थिए र सोध्दै थिए 'भगवान कृपया त्यसो गर्नु हुँदैन, रिगबर्ट लिनु हुँदैन। म मलाई फिर्ता आउनको लागि धन्यबाद भन्छु। "
रितुबर्ट गीत बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य -पारिवारिक तथ्यहरू
आफ्नो बुबा, पॉल ग्वार को एक निविदा उमेर मा खोने को विचार र उनको स्मृति मा उनको तस्वीर पनि नहीं उनको विचार रिगर्बर्ट गीत को अहिरो दर्द लेता छ। बढ्दै गर्दा, उनको आमा, बर्नडेनेट गीतले आफ्ना नातेदारहरूको सहयोग पायो। साथै उनको आधे भाइ हो जो पहिले आर्सेलियन फुटबलर र क्यामोन रक्षात्मक मिडफिल्डर को पिता हो, एलेक्सा एलेक्स साईन, अलेक्जेंडर डाइमिरी सांग ग्लोबल।
एलेक्स गीत सधैंभरि उनको चाचाको आभारी हुन्छ रिगाबर्ट गीत जो एक दोस्रो बुबा जस्तै भएको छ र उनको एक प्रमुख प्रभाव एक कैरियरको रूपमा फुटबल छनौट गर्दछ। तल एलेक्स र उनको परिवार हो।
रितुबर्ट गीत बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य -रातो कार्ड तथ्य
यसबाहेक Zinedine Zidane, रिगर्बर्ट गीत एकमात्र खेलाडी हो जुन दुई अलग विश्व कपहरूमा, ब्राजील विरुद्ध 1994 मा र चिनियाँ विरुद्ध 1998 अर्को। उनले पनि 17 उमेरको विश्व कपमा पठाएको सबैभन्दा सानो खेलाडीको रूपमा रेकर्ड पनि राख्छ।
अर्को कोणबाट, रिगाबरट गाउलाई 1994 र 2010 फीफा विश्व कप टूर्नामेंटहरूमा खेल्ने एकमात्र खेलाडीलाई भनिएको छ। उहाँ 1994, 1998, 2002 र 2010 फीफा विश्व कप टूर्नामेंटमा प्रदर्शित गरिएको थियो।
अन्ततः, एक चौंकाने तथ्यले एक पटक एक 24 वर्ष र 42 दिन बीचको अंतरलाई अन्त्य गर्यो रोजर मिल्ला (एक्सएनएनएक्सएक्स र 42 दिन) माथि चित्रण र 17 वर्ष पुरानो रिगाबर्ट गीत (17 वर्ष र 358 दिन) 1994 विश्व कपको समयमा। यो उमेर अन्तरिक्ष विश्व कप इतिहासको दुई टोली बीचको सबैभन्दा ठूलो बनी रहेको छ।
यो नोट गर्न अलिक छ कि अनावश्यक स्ट्राइकर रोजर मल्ला वर्ष 1900 मा विश्व कप क्वार्टर-फाइनलमा अप्ठ्यारो लाग्ने नेतृत्व भयो।
रितुबर्ट गीत बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य -मलाई रियो फर्डिनल्याण्डको तुलना नगर्नुहोस्
जब रिजीबर्ट गीतले वर्ष 2.5 मा £ 2000 मिलियन को लागि वेस्ट हेम यून को लागि हस्ताक्षर गरे, क्लब ले उसलाई उनको संभव प्रतिस्थापन को रूप मा पहचाना रियो फर्डिनान्ड, जसले लीड्स युनाइटेडमा पठाइयो। यो तथ्यले पूर्व-क्यामेरानियन डिफेंडरलाई गुमायो।
रिगाबल्ट गीतको पहिलो पटक वर्णन गरिएको थियो बीबीसी as "दुखी". आफ्नो पहिलो दिनमा, गीतले जोर दिए कि उनी फर्डिनान्डको तुलनामा चाहँदैनन्, किनकि उनले विश्वास गरे कि यो आफ्नो प्रतिभा को अपमानजनक थियो।
रितुबर्ट गीत बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य -व्यक्तिगत जीवन
रिगार्ब गहिरो सहज र भावुक छ। उहाँ धेरै भावनात्मक, संवेदनशील, र परिवार र तिनको घरको बारेमा गहिरो ध्यान राख्नुहुन्छ। रिगाबर्ट सहानुभूतिजनक छ र उहाँसँग नजिक रहनु भएको छ संग संलग्न। उहाँ कसैलाई हुनुहुन्छ जुन अरू मानिसको पीडा र पीडा संग सहानुभूति हुनेछ। माथिको आधारमा आधार, हामी अब तपाईलाई आफ्नो व्यक्तित्वका विशेषताहरू प्रदान गर्छौं।
शक्ति: उहाँ Tenacious, अति कल्पनाशील, भावनात्मक, सहानुभूति र धेरै उत्साहजनक हुनुहुन्छ।
कमजोरीहरू: उहाँ मूडी, निराशावादी, शंकास्पद र हेरफेर हुन सक्नुहुनेछ।
कुन रिगबर्ट गीत मनपर्छ: कला, शौकहरू (गृह आधारित प्रकार), नजिकैको वा पानीमा आराम, आफ्नो परिवार / आफन्तहरूलाई सहयोग गर्न र साथीहरूसँग राम्रो खाना बनाउन।
कुन रिगबर्टले नमनपराउँछ: अजनबारी, उनको श्रीमती र प्रेमी (हरू) को बारेमा व्यक्तिगत तथ्याङ्कहरू प्रकट गर्दै उनको प्यारी आमाको कुनै आलोचना
रितुबर्ट गीत बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य -प्रबन्धकीय आशाहरू
2015 अन्तर्वार्तामा, गीतले अज्ञात कारण चाड राष्ट्रिय टोलीको प्रबन्धक बन्नु भएको थियो तर अज्ञात कारणहरूको लागि एक सम्झौतालाई अन्तिम रूपमा समाप्त गरिएको थिएन। फरवरी 2016 मा, गीत को प्रबन्धक को रूपमा नियुक्त गरियो क्यामरून "ए" राष्ट्रिय टोली। यो "एक" टीम क्यामरून मा आधारित खेलाडीहरु संग एक राष्ट्रीय टीम हो। अप्रिल 2018 मा, रिगाबर्ट बने खाली खाली क्यामेरान राष्ट्रिय टीम को नौकरी को लागि 77 आवेदकों मध्ये एक थियो।
तथ्य जाँच गर्नुहोस्: हाम्रो रिगाबर्ट गीत बचपन स्टोरी प्लस अनगिन्ड जीवनी तथ्यहरू पढ्नका लागि धन्यवाद। मा LifeBogger, हामी शुद्धता र निष्पक्षताको लागि प्रयास गर्छौं। यदि तपाइँ केहि कुरा देख्नुहुन्छ जुन यस लेखमा सही देखिएन, कृपया तपाईंको टिप्पणी राख्नुहोस् वा हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस् !.
12 सक्छ, 2018